जनताले सोचेजस्तो त्यो दिन कहिले आउला ? – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
जनताले सोचेजस्तो त्यो दिन कहिले आउला ?
२०७१ श्रावण २८, बुधबार ०१:५९ गते
यो कुरा भन्न गाह्रो भइरहेको छ कि प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण हाम्रो देशमा शान्ति होला या नहोला ! हिजो एकताबद्ध भएको समाज आज छिन्नभिन्न र छरपस्ट बन्न पुगेको छ । आज एकअर्कामा शंका बढेको छ र विश्वासको संकट पैदा भएको छ । मुलुकको शासनप्रणाली परिवर्तनपछि कहीँ न कहीँको राजनीतिमा तरलता त हुने नै गर्छ । तर, हाम्रो यहाँ भने तरलताको कुनै समय नै छैन । आखिर यो कहिलेसम्म रहने हो ? सबैलाई यही विषयले पिरोलेको छ । यहाँ धेरै शासनप्रणालीलाई नेपाली जनताले देखिसके, भोगिसके । कुनै पनि शासकहरुले ल्याएको या शासन गरेको प्रणालीबाट जनता सन्तुष्ट भएको पाइएको छैन । सानो राष्ट्र, थोरै लगानीबाट धेरै जनसमुदायलाई लाभ हुन्छ, तर यसबारेमा सोच्ने फुर्सद यहाँ कसैलाई छैन ।
हिजो एक समय राणाहरुलाई गाली गरेर सुख पाइन्थ्यो भने फेरि राजाहरुलाई गाली गरेर जनतालाई आकर्षण गर्ने माध्यम हुन्थ्यो । तर, २०४६ सालपछि लगातार सत्ताको स्वाद चाख्नेहरु फेरि सत्तामा पुगेका छन् । आफ्नो काँधमा जिम्मेवारी आएको छ । जनताले के भनिरहेका होलान् भनेर सोच्ने फुर्सद यिनीहरुमा भएजस्तो लाग्दैन । दिनहुँ एकले अर्कोलाई गालीगलौच गर्नेभन्दा के नै गरिरहेका छन् र ? सबैले यहाँ एकले अर्कालाई निरंकुश देख्छन् र भन्छन्– तिमीहरु निरंकुश होऊ, तानाशाह
हौ । तर, उनीहरु आफैँ पार्टीभित्र कति निरंकुश छन् भन्ने उनीहरुको चरित्रले देखाइरहेको छ । राजालाई निरंकुश भनिएपछि जनताले उनलाई साथ दिएनन्, राजा हराए । राजा हट्नेबित्तिकै कुनै नयाँ चमत्कारी शक्ति देखिएन, बरू देख्दादेख्दै हरेक दलहरुमा नयाँ राजा र महाराजाहरु जन्मिए । आज तिनै महाराजाहरुका कारण देशको दुर्गति दिनानुदिन बढ्दो छ । यहाँ यिनै महाराजाहरुका कारण भएको शान्तिसमेत खलबलियो ।
फेरि त्यो दिन आउला या नआउला ? राजनीतिक दलका नेताहरुको क्रियाकलाप हेर्दा त लाग्छ, त्यो दिन आउने कल्पना गर्नु टाढाको विषय हो । यिनीहरुले मुलुकलाई कानुनी शासन दिएमात्रै पनि नेपाली जनताले शान्तिको सास फेर्थे होलान्, तर मुलुक त्यतातिर उन्मुख छैन । मुलुकलाई बनाउन कसैले कसैलाई अलग गरेर होइन, जबसम्म सबैले सबैलाई सम्मान गर्ने भावनाको विकास सबै दलका महाराजाहरु (पहलमान)मा हुँदैन तबसम्म यहाँ केही होला भन्ने कल्पना नगर्दा हुन्छ । राजा हट्नेबित्तिकै मुलुकलाई स्वर्ग बनाउँछौँ भन्नेहरुले स्वर्ग बनाउने सोचको पनि विकास गर्नुपथ्र्यो । दलीय स्वार्थलाई त्यागेर राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यान दिएर कामको प्रारम्भ गरियो भने मुलुक तबमात्र स्वर्ग बन्न सक्छ ।
हिजो पञ्चायतकालमा भनौँ या राजा वीरेन्द्रकै शासनकालमा आएको शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव र एसियाली मापदण्डमा (२०५७ सम्म) मुलुकलाई पु¥याउने प्रतिबद्धतालाई मूर्तरुप दिन आएको विदेशी सहयोग होस् या २०४६ मा आएको बहुदलीय व्यवस्थालाई व्यवस्थापन गर्नका खातिर आएको आर्थिक सहयोग नै किन नहोस्, ती सहयोगहरुलाई जनहितका लागि समुचित प्रयोग गरेको भए आज नेपाली जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउने थिए । अहिले पनि शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउने नाममा विभिन्न कोण र क्षेत्रकाट अरबौँ रूपैयाँ आइरहेको छ, त्यसको कुनै लेखजोखा छैन ।
अहिले देशमा विकासको गति ठप्प छ । प्रशासन भ्रष्टाचारमा डुबेको छ । यहाँ कोही, कसैलाई मतलब छैन । सबैले आफूलाई जनताको ठेकेदार सम्झिँदै लोकतन्त्र÷जनतन्त्रको नाउँमा ठूलाठूला भाषण छाँट्छन् । तर, जनताप्रति उत्तरदायी भएका कोही छैनन् । सरकारका मन्त्रीहरु नै अधिकांश आफू बन्ने धुनमा छन् । त्यसपछि पार्टीभित्रको गुट निर्माणतिर लागिरहेका छन् । गुट बलियो भएपछि अनि पार्टीगत स्वार्थमा लागेपछि मुुलुक, प्रजातन्त्र र जनता त कहाँ हो कहाँ पुग्छन् ! यी तीन विषय उनीहरुका लागि मागिखाने भाँडो बनेको छ । संविधान कागजको खोस्टा हो भन्ने मानसिकताले देशको शासन र प्रशासन चल्न थालेपछि जनताले यिनीहरुबाट के नै आशा गर्ने ?
नेताहरु एउटा दलका छन् तर भाषण गर्दा पार्टीको नीति र कार्यक्रमका बारेमा फरक–फरक बोलिरहेका हुन्छन् । जति भाषण गर्न पायो, त्यति नै ठूलो भइन्छ भन्ने मानसिकताले बास गरेको छ यिनीहरुका मनमा । त्यसैले, कोभन्दा को कम भन्ने होडबाजी चलिरहेको छ । जनताका अगाडि को कति क्रान्तिकारी बन्ने भन्ने दौडमा दौडिरहेका छन्, यिनीहरु । विकृति र विसंगतिले डेरा जमाएको मन–मस्तिष्कबाट कुन त्यस्तो परिष्कृत विचार आउला र ?
आज हरेक पार्टीभित्र गुट छ, गुटभित्र पनि उपगुटहरु मौलाइरहेका छन् । पार्टीभित्रका भातृ संगठनहरु हेरियो भने बिजोग छ । १०–१५ वर्षसम्म भातृ संस्थाहरुमा अधिवेशन हुन सकेको छैन । दल र तिनका भातृ संस्थामा विचारको प्रतिनिधित्व गर्ने विचार–नायकहरुको हबिगत के
होला ! विचार दिन सक्नेहरु त रछ्यानमा फालिएका छन् । कठै बिचरा ! फेरि पनि उनीहरु भन्दैछन्, बोल्दैछन् र लेख्दैछन् ‘मार्गचित्रका कुराहरु ।’
जनताले राज्यबाट आज केही खोजेका छन् । केही खोजेका छन् भने त्यो शान्ति नै हो । धेरै शासकहरुले शासन गरे, उनीहरु आए र गए । फेरि पनि कोही आएका छन्, कोही भर्खरै गएका छन् । तर, जनताको मुहार फेर्न सक्ने शासन भने आएन । जनताको नाममा राज्य चलाए, अझै चलाउँदै छन् । फेरि अर्को कोही आएर राज्य चलाउला तर जनताको नाउँमा गरिएको वा भनिएको शासनले आजसम्म के–के दिएको छ त जनतालाई ? महँगी, भ्रष्टाचार, कुशासन, अभाव, अशान्ति र असुरक्षाबाहेक अरु केही दिएन ।
साँच्चै नै निस्वार्थ भावनाले मुलुक बनाउने प्रण गरे यो मुलुकले धेरै होइन, एक वर्षभित्र काँचुली फेर्न सक्छ । तर, त्यो ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भन्ने उखानलाई सम्झिँदा राम्रो होला । शान्ति, एकता र विकासले कहिले स्थायित्व पाउला अब ? जनताले ठूलो लोभ र लालच होइन, सामान्य आशा गरेका छन् । यसमा सबैले निस्वार्थ भएर काम गरे सो अवस्थामा हामी पुग्न सक्छौँ । तर, भन्नैपर्ने हुन्छ कि त्यो अझै टाढाको विषय बनेको छ । यहाँ सिस्टमको मात्रै विकास भए चाहेजस्तो नेपाल बनाउन सकिन्छ । तर, सिस्टम यहाँ नेतालाई होइन, जनतालाई मात्रै चाहिएको छ ।
सामाजिक अभियानमा बखानसिंह गुरूङले पुर्‍याएको योगदान
व्यक्तिवादी इगोमा टुक्रिएको जन मन